- Heavy Duty inotonga pamusoro kwemakore ekushandisa
- Waya yepamusoro Hermes dhizaini yesimbi yakasimba yakasungwa chisimbiso
- Yakatwasuka Wall mukati kuitira kuti iwe ugone kusvika kune rako bud
- Silicone mhete inodzivirira kunhuwirira kutiza uye inochengeta zvirimo zvitsva
- Bvisa chirongo kuitira kuti ugare uchiziva kana iri nguva yekuzadza
Tsananguro Zvipo Brand Mhepo Yakasimba Chakavanzika Stash Midziyo
KUCHENGETA ZVINYORWA ZVAKO UYE KUCHENGETEDZA KWAZVO ZVAKAITIKA HAZVINA KUMBIRA ZVAKAITIKA!
Chengetedza mahebhu ako mumidziyo yedu inochengeterwa mweya
- Wakaneta here nemiriwo nyoro, ine hunyoro kuoma?
- Wakaneta nekuchengeta bhudzi rako mune diki zipi bhegi?
- Unoda nzira yekuchengetedza hwema hurimo?
5 Zvikonzero ichi chirongo chako chekuchengetera iwe! *
- Waya-Pamusoro pafiripi muvharo inogadzira yakasimba, yakasimba chisimbiso, ichichengetedza mweya kunze uye hwema mukati
- Yakareba silicone mhete inova nechokwadi chisimbiso chakakwana nguva imwe neimwe
- Kudya-Giredhi repurasitiki harizonyore mukati mebundu rako, kana kupinza chero hwema
- Yakakwira Density epurasitiki haina huremu & ingangoita isingaparare
- Yakagadziriswa yepamusoro ine dome rekudzivirira kwemakore ekushandisa
** Jar inoyera masendimita matatu paupamhi, saka iwe unozogona kutora mbiya kana minwe yako imomo nyore.
** Inongova ne2,5 inches kureba, iyi diki yakasindimara ndiyo saizi yakakwana yekufamba.
Yedu Herb Grinder inogadzirwa nealuminium 6061-T6 uye yakasimba magineti muvharo izvo zvinoita kuti chishandiso ichi chiome uye chigare. Magineti muvharo unokubatsira kuchengetedza herb yako zvakanaka uye kudzikisa kudeuka.Iyo isina chinhu mesh skrini inobatsira kutora upfu hwakatsetseka.
Iyi yekukuya ine mazino anopinza ekupedzisira ayo anonyatso gaya chikamu chese chemuti, kubva kumakwenzi akareruka kusvika kune akanyanya, kukuya izvozvi kunongotora twists dzinoverengeka. Aya mazino anogara akapinza kwenguva yakareba uye ari nyore kuchenesa.
69.5mm herb grinder ine hombe yekubata inokwana, iyo inobvumidza iwe kukuya mimwe miriwo kamwechete.
Pashure: aruminiyamu miriwo yekukuya
Zvadaro: sora weed grinder